I-PIVX Core Wallet 3.1.0.2 | PIVX
I-PIVX Wallet v3.1.0.2 I-Update EDINGEKAYO
Ekuqaleni kukaJanuwari, sazisa i-2018 roadmap enokufumaneka apha. Emva kweeyure zokukhangela kunye nokuvavanya, kunye nexabiso elingenakubalwa kweziphuzo zamandla kunye nekhofi, siyavuya ukuvakalisa ukuba ispaji se v3.1.0 is siLIVE
I-PIVX Core Wallet v3.1.0.2 yinto yokuvuselela okufunekayo kubo bonke abasebenzisi njengoko iqulethe ukuphucula kunye nemithetho engayi kuhambelana neenguqulelo zangaphambilini.
Umhla wokugqibela wokuhlaziya uMeyi 8, 2018 12:00:00 AM GMT.
Ukuba awukwazi ukuhlaziya umxhasi phambi komhla wokugqibela, i-wallet yakho iya kufuna i-resync epheleleyo ye-blockchain.
Ngokuhlaziywa kwe-v3.1.0.2, kunye neempawu ezongezelelweyo eziye zongezwa, kukho imithetho embalwa yokugcina indlu esiyathanda ukuyifumana kuluntu lwethu:
1. Naluphina i-zPIV eboniswe ngesikhwama se-3.0.6 nangaphantsi asiyi kuba ne-qualification ye-zPIV, kwaye ayiyi kukwazi ukuxhaswa ngembewu. Naluphina i-zPIV ekuhanjisweni kuyakufuneka iguqulwe kwi-PIV xa i-ZPIV iphinda ivuselelwe ngomhla we-Meyi 8, kwaye ibuyiswe kwi-ZPIV usebenzisa i-wallet entsha (v3.1.0.2), ukuqinisekisa ukuba unokufumana zonke iinzuzo.
Yenza i-wallet.dat isipele ngaphambi kokuphucula.
Ukuxhasa inkxaso, nceda landela imiyalelo ye-OS yakho apha.
Ukukhuphela nokuphucula kwi-v3.1.0.2 entsha yekhredithi ngexesha lakho lokuqala apha ngezantsi.
3. Njengoko oku kuhlaziywa okufunekayo, naziphi na izikhwama kunye namasondo angakhange ahlaziywe kwi v3.1.0.2 ngexesha elidlulileyo aliyi kuhambelana nenethiwekhi entsha ye-zPoS. Oku kuthetha ukuba yonke imisebenzi yakho kunye nemivuzo ayiyi kusebenza kwi-intanethi.
Oku kuyimodeli encinci yeempawu kunye nomyinge womsebenzi oye wahamba ekuqulunqeni ukukhululwa kwesiCore Wallet.Please see our full release notes for more information.
i-zPIV Staking (zPoS).
Ngokukhutshwa kwe-zPIV staking, kukho iinguqulelo ezi-2 ze-zPIV, zPIV ezichazwe kwi-3.0.6 i-PIVX isikhwama okanye ngaphantsi, kwaye i-zPIV ifakwe kwiphepha le-PIVX okanye ngaphezulu. Iinkalo ezintsha kulokhu kukhupha ziya kufuna ukusetyenziswa kwe-zPIV v2, zPIV zityhilelwe kule ngxowa-mali okanye emva koko. Ukuba njengamanje ubamba i-zPIV v1 kwaye unqwenela ukusebenzisa inzuzo ye-zPIV kunye ne-deterministic zPIV, kuya kufuneka uchithe i-zPIV v1 kuwe kwaye uguqule i-zPIV v2. Ukuze usebenzise inzuzo ye-zPIV staking, kufuneka ufake i-zPIV v2 entsha kwaye ulinde ubuncinane ubungqina obungama-200 ngaphambi kokuba i-ZPIV ithathwa njengesiqinisekiso sokusebenza.
QAPHELA: zPoS incike kwi-zPIV ephuma kwimodi yesondlo, engenawo usuku / ixesha / ukuphakama kwexesha. Kuya kuba ngumbandela wokuzinza kwenethiwekhi obeka umzuzu ochanekileyo xa i-zPIV iphuma kwimodi yesondlo – Xa ubuninzi abasebenzisi abangama-70% kwi-version entsha.
Ukukhuthaza ukusetyenziswa okusebenzayo kwenkqubo entsha ye-zPoS, iigaker ezisebenzisa i-zPIV ziya kuvuzwa ngesabelo esiphezulu se-50% somvuzo webhloko. Umvuzo webhloko uza kwahlukana ngolu hlobo lulandelayo:
iPIV Staking: Umgcini we-PIV ufumana ibhloko: 3 i-PIV ukuya kuma-masternode, 2 i-PIV ukuya kwi-staker, isabelomali se-PIV
zPIV Staking (zPoS) I-zpIV staker ifumana ibhloko: 2 i-PIV ukuya kuma-masternode, 3 i-ZPIV ukuya kwi-staker, isabelomali se-PIV
I-Deterministic zPIV Seed Keys
i-zPIV ngoku idibaniswe nencoko yembewu. Ngaloo ncitshi yembewu, abasebenzisi banako ukukhusela ngokukhuselekileyo i-zPIV ngaphandle kwesikhwama sokuba i-zPIV ifakwe kuyo. i-zPIV inokudluliselwa kwi-wallet ukuya kwisikhwama ngaphandle kwemfuneko yokudlulisa iifayili yedatha yekhredithi.
Ukuhlaziywa kweZPIV Minting
Umshicileli we-zPIV ngoku ufuna enye i-minti (ngaphezulu kwe-2) ukukhula. Imizuzu ye-zPIV idinga ukuqinisekiswa kwangama-20. Amancinci afuna ukuba i-‘town ‘ingqunqwana ubuncinane ubuncinci bezinto zokukhangela ezinzulu kwi-chain (le nto yayivele yimeko, kodwa ingqiqo yayingekho ngqo).
Abasebenzisi ngoku banako ukukhangela i-blockchain kwi-serial ethile ye-# ukuze babone ukuba idilesi ye-zPIV isetyenzisiwe okanye cha.
Ukuhlawulwa kweSpaji seGUI
Ubume bokubonakala kwesikhwama se-PIVX Qt buye kwagqitywa. Isakhiwo esitsha ‘setekisi esicacileyo’ sisetyenzisiweyo endaweni yesithuba ‘sangaphambili sethebhu’, kunye nesethi entsha yesithonjana. Isicatshulwa esicwangcisiweyo senziwe lula kakhulu ukuba sibonise izilinganiso kuphela ezisebenzayo okanye ezifanelekileyo, izinto zendlela yokulinganisela ezifihliweyo zifihliweyo ngokuzenzekelayo ukukhusela i-clutter.
Buyisela utshintsho kumthumeli xa uhambisa i-zPIV
Ngaphambili, imveliso ye-zPIV yayiza kuthumela nayiphi na utshintsho kwi-“dilesi yenguqu” esandul ‘yenziwe. Oku kubangele ukudideka phakathi kwabasebenzisi abathile, kwaye kwezinye iimeko zithinteli izikhwama ezikhoyo. Esi sikhwama siya kufumana idilesi egalelayo equlethe i-PIV kwaye ibuyisele utshintsho kwi-zPIV yeminzana kule dilesi.
Khubaza ukuSebenza koMsebenzi / Beka Inani
Nika amandla kwaye ukhubaze umfanekiso we-zPIV minting feature. Oku kunikwe amandla ngokungagqibekanga kwaye isilungiselelo se-enablezeromint = 0 kwifayile ye-pivx.conf iya kubhala ngaphezulu i-GUI inketho. Ipesenteji ye-zPIV ezenziwe ngokuzenzekelayo ngoku iyakusetwa ukusuka ku-1 ukuya kwi-100, ishintshiwe ukusuka ku-10 ukuya ku-100.
Backup yokugcina ngaphandle
Isikhwama se-PIVX sinokufumana iikhowudi ezikhethiweyo zomsebenzisi kwi-backups ngokuzenzekelayo yefayili yedata yefolda (wallet.dat). Nceda uvakashele amanqaku ethu okukhulula okukhululekile ukuze ufumane iinkcukacha ezisezantsi zokumisela Uqeqesho oluzayo kungekudala.
Ukunyanzeliswa v1 zPIV isebenzisa ukufuna inqanaba lokukhusela eli-100
Ukuhlaziywa kwi-zPIV kuchitha ukukhusela i-segfaults
Uhlaziyo lokucwangcisa luya kubonakalisa ngokubhekisele kwithebhu yobumfihlo
Ikhutshwe i-bug engayi kuqali i-masternodes kwi-PIVX-Qt yamatodes tab
Ukusetyenziswa kwee-tooltips ze-PIVX-Qt
Icon yongezwa kwi-GUI yekhredithi ukubonakalisa isimo sokuzenzekelayo (esebenzayo / esingasebenzi)
Iimpazamo ezihlaziyiweyo ezibangela i-blockchain ukuba inonakalise xa ifumana ukuvalwa kwekhredithi engalindelekanga
I-RPC ehlaziyiweyo igalelo iziphumo kwaye isuswe ukukhishwa komsebenzi.
Ikhowudi yokubuyiswa kwakhona